Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Caawinta Guri La'aanta|Deeqda Xalka Degdega ah
Barnaamijka Gargaarka Xallinta Degdegga ah (ESG) wuxuu u adeegsadaa lacagaha dawladda dhexe si ay uga taageeraan jaaliyadaha bixinta fidinta waddooyinka, hoyga degdegga ah, kaalmada kirada, iyo adeegyada la xiriira. Barnaamijkan wuxuu siiyaa ilo dhaqaale dadka waaweyn iyo qoysaska leh carruurta la kulma ama qatar ugu jirta guri la’aan.
Ujeeddada barnaamijka ESG waa in la siiyo ka hortagga hoy la'aanta caawimaadda qoysaska haddii kale guri la'aan noqon lahaa iyo in gargaar la siiyo dadka sida degdegga ah ugu soo noqnoqda guri la'aanta. Lacagaha ku hoos jira barnaamijkan waxaa loogu talagalay in lagu bartilmaameedsado shakhsiyaadka iyo qoysaska bilaa hoyga ah laakiin kaalmadan awgeed. Lacagtu waxay bixin doontaa gargaar kala duwan, oo ay ka mid yihiin: Caawinta kirada muddada-gaaban ama muddada-dhexe, Raadinta iyo Meelaynta Guriyeynta, iyo Maareynta Kiiska Degenaanshaha.
Qorshe Hawleedka ESG
Guga kasta waxaa la soosaaraa Qorshe Hawleed sanadle ah oo lagu qeexo sida gobolku u isticmaali doono qoondeynta sanadlaha ah ee miisaaniyadda HUD si loo daboolo baahiyaha guryaha la awoodi karo iyo horumarinta bulshada. Qorshooyinka Waxqabadka waa wax-ka-beddelka sanadlaha ah ee Qorshaha Iskujira ee shanta sano ah. Qorshaha Waxqabadka wuxuu raacayaa shaxanka qorshaha HUD. Eeg annaga hadda Qorshe-hawleed Wixii macluumaad dheeraad ah.
Qalabka Grant ee ESG
Tilmaamaha Deeqaha Xallinta Degdega ah Tilmaamaha Deeqaha 2017-2019 (PDF)
Halkan guji si aad u hesho foomamka ESG
CARES Xeerka Xallinta Degdegga ah - COVID-19 (ESG-CV)
Deeqaha Gargaarka Degdegga ah ee COVID-19 (ESG-CV) waxaa loo isticmaali doonaa in looga hortago, loogu diyaar garoobo, waxna looga qabto cudurka faafa ee loo yaqaan 'Coronavirus' ee ka dhex dhaca shakhsiyaadka iyo qoysaska bilaa hoyga ah ama hela gargaarka aan hoy la'aanta ahayn. Lacagaha ayaa sidoo kale taageeri doona gargaar dheeraad ah oo hoylaawe ah iyo howlaha ka hortagga hoylaaweyaasha si loo yareeyo saameynta Coronavirus. Ganacsigu wuxuu ku abaalmarinayaa lacagaha ESG-CV hay'adaha hoggaanka u ah isku-darka Deeqaha Guri la'aanta. Faahfaahin dheeraad ah, fadlan eeg ilahaan:
Guudmarka ESG-CV - Dukumintigaani wuxuu bixinayaa macluumaad ku saabsan qoondaynta Gobolka Washington ee ESG-CV-1 iyo lacagaha ESG CV-2 (PDF)
COVID-19 Macluumaadka iyo Cusbooneysiinta deeq-bixiyeyaasha
HUD ESG-CV Hanuuninta Deeqaha
Qalabka Grant ee ESG-CV
Tilmaamaha Deeqaha ee Xallinta Degdegga ah ee ESG-CV (PDF)
Halkan guji si aad uhesho Foomamka ESG-CV
Maamulka Guryaha (shabakad)
TA Hanuuninta (PDF-yada)
Ku qor liiska HUD SNAPS liistada (wixii macluumaad ah ee ku saabsan ESG / ESG-CV)
Ganacsi si toos ah uma siiso adeegyo dadka halista ugu jira ama la kulmaya hoy la’aanta. Fadlan tixraac "Caawinaad u baahan tahay?" xiriiriyeyaasha sare haddii aad u baahan tahay caawimaad shaqsiyeed.
ESG iyo Maareeyaha Barnaamijka ESG-CV
Isuduwaha Grant ESG-CV